Wax walba oo ku saabsan Shirweynaha Dunida ee Wareegga 2022 - Androidsis | Androidsis
El Golaha Caalamiga ah ee Mobile-ka waa dhacdada taleefanka ee horseedka ka ah magaalada Barcelona. Maalmaha uu dhacayo MWC-da, Barcelona waxaa loo taagay xarunta adduunka ee wararka la xiriira taleefanka iyo teknoolojiyada cusub.
Waa a dhacdo horseed ah taas oo kumanaan qof iyo shirkadaha ugu waaweyn ee waaxda (Samsung, Apple, LG, Huawei, Microsoft, iwm) ay ku kulmaan si ay adduunka ugu soo bandhigaan wararka suuqa ku dhici doona bilaha soo socda.
Golaha Moobaylka Dunida 2019
Sanadka 2016 ballanta ayaa dhici doonta inta udhaxeysa Febraayo 25 iyo 28, iyo kooxda Androidsis waxay la joogi doonaan dhowr tafatirayaal carwada si ay uga warbixiyaan ugana warbixiyaan dhammaan bandhigyada wax soo saarka inay halkaas ka dhacaan. Ha seegin fiidiyowyadeenna iyo sawirradeenna si gaar ah dhammaan taleefannada casriga ah iyo kiniinnada cusub ee laga bilaabay suuqa.
Wararka ku saabsan MWC
Si laguula socodsiiyo dhacdada, qaybtaan waxaad ku arki kartaa dhammaan wararka isla markiiba. Waxa kale oo aad kala socon kartaa adoo adeegsanaya kanaga Muuqaalka Twitter.
Markii GSMA ay go'aansatay inay kansal gareyso Shirweynihii Dunida ee Mobile-ka 2020, inbadan baa cirka u dhawaaqday. Saxaafaddu ma fahmin ...
Warkii ugu xumaa wuxuu yimaaddaa ka dib markii laga bartay dhaawacyada tirada badan ee ka soo gaadhay Shirweynihii Dunida ee Moobaylka, baajinta dhacdadii ...
Ericsson sidoo kale ma xaadiri doono MWC 2020
Fayraska 'coronavirus' wuxuu sii wadaa inuu wax ka qabto, gudaha iyo dibedda Shiinaha, oo si sax ah uma aha dadka, laakiin ...
by Nerea Pereira samee 3 sano .
Golaha Moobaylka Dunida 2019 ayaa gabagabo ah. Carwadii ugu weyneyd ee taleefanka ayaa ahayd goobta ugu habboon ...
OUKITEL waa mid ka mid ah magacyada badan ee jooga MWC 2019. Dhacdada ka dhacday Barcelona shirkaddu waxay leedahay…
TCL waa mid ka mid ah shirkadaha jooga MWC 2019, iyo kuwa kale oo leh noocyo cusub oo casri ah ...
Khadka wireless-ka ayaa ah waxa ugu caansan Android maanta. Waxay isticmaashaa xamuulka ...
Maanta Febraayo 24, 2019, calaamadda MWC19, Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah ...
Dhowr bilood ka hor ayaa la shaaciyey in OPPO ay ka shaqeyneyso 10x tiknoolajiyad indho indheyn ah iyada oo aan lumin tayada….
Berri MWC 2019 wuxuu ku bilaabmayaa bandhigyo taxane ah. Noocyo dhowr ah ayaa horeyba u abaabulay munaasabad soo bandhig, ...
MWC 2019 wuxuu si rasmi ah u bilaabanayaa Febraayo 25, wuxuuna socon doonaa illaa Febraayo 28. Wax yar